Somaliland Iyo Soomaaliya Oo Ku Heshiiyay Dhawr Qodob Kadib Markii Dawladda Djibouti Ku Guntatay In Aanu Shirku Burburin | #1Araweelo News Network
Somaliland Iyo Soomaaliya Oo Ku Heshiiyay Dhawr Qodob Kadib Markii Dawladda Djibouti Ku Guntatay In Aanu Shirku Burburin
Djibouti!(ANN)-Dhinacyada Somaliland Iyo Soomaaliya ee shirka wada hadalku uga socday Dalka Djibouti oo dib laysugu soo celiyay cawyskii caawa kadib markii ay ku kala kaceen fadhiga, ayaa soo saaray saqdii dhexe dhawr qodob oo ay Isla qaateen.
Waxayna labada dhinac ee Shirkii wada-hadalada Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya kala saxeexdeen waxa loo yaqaan Minutes-ka, kaasi oo ah is afgarad hordhac ah.
Sidoo kale waxay sheegeen in laysla qaatay Shan qodob kuwaasi oo loo saaray Saddex guddi hoosaad oo ka wada shaqayn doono qodobadaa , Waxaana ka mida qodabadaa uu Warbaahinta u akhriyey Shirgudoonka Shirka oo ah Wasiirka Arrimaha Dibada ee Djibouti oo iyadu marti gelisay shirkaa.
3. Sidii loo meel marin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin sida Kaalmooyinka Dhaqaale ee Caalamiga ah iyo Gargaarada Bani-aadamnimo, waxaana qodobkaasi loo saaray guddi, kuwaasi oo shiridoona muddo shan iyo toban cisho (15) ka dib ah, kuna shiridoona waddanka Djiboti.
4. Waxaa ay labada dhincba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona Arrimaha Hawada, kuwaasi oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiridoona waddanka Djibouti.
Dhamman Saddexdaa guddi shan iyo toban cisho ka dib waxay ku kulmi doonaan dalka Djibouti, waxaana lagu magacaabay guddiyadaasi (Technical sub comment) Guddida guud ee farsamado ee wada-hadalada oo lagu magacaabo (Join Ministerial Comment), waxaanay 45-cisho ka dib ku kulmi doonaan Dalka Djibouti si u qiimeeyaan wax qabadka guddi hoosaadyada.